KN95, Maskaxda qalliinka Maskaxda lagu ridi karo, Go'doon-Gado-Missadola
Wellcome to Dongguan
(Shenzhen) Missadola teknolojiyada Co., Ltd.
DongGuan Missadola teknolojiyada Co., Ltd. (oo sidoo kale loo yaqaan ShenZheng Missadola technology Co., Ltd.) waa shirkad dhoofinta maaskaro caafimaad / aan caafimaad ahayn. Waxaa naga go'an abuurista wax soo saarka, horumarka iyo wax soo saarka. Waxaan iskaashi la leenahay machadyada hogaaminta caafimaadka si aan ugu sii fogaano heerka horumarka iyo sayniska caafimaadka ee warshadaha.
Waxaan sidoo kale leenahay warshad caalami ah oo heer sare ah oo GMP ah, ku dhawaad ​​2,000 mitir murabac ah oo fasalka ka mid ah 100,000 oo aqoon isweydaarsiga hawo qabow, 5000 mitir murabac ah fasalka 100,000 aqoon isweydaarsiga aan boodhka lahayn ee lagu caddeeyay heerarka qaranka. Noocayaga u gaarka ah “1AK” iyo “Dr.Adola” ayaa si wanaagsan loogu qirey sawirka adeegga macaamiisha xirfadleyda ah iyo waxsoosaar aad u sarreeya oo ay ka heleen in ka badan 100 macaamiil oo ka kala socda 80 dal oo adduunka ah.
Waxaa naga go'an inaan si hufan u siinno macaamiisha xalka u leh dabeecad adag. Aaminaada waa in lagu kasbadaa wax soo saar iyo adeegyo wanaagsan waxaanna ognahay in macaamiisha ay nagu aaminaan marka ay timaado waji xidhka. Adola waxay ku hadashaa si tayo leh oo xirfad leh. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, fadlan nala soo xiriir!
2626-4 Heer tayo sare leh oo 3-Lakabad ah oo la Daweyn Karo ...
2626-3 3 Looshaqeeyaasha Quusinta Madaniga ah ee Fudud ee M ...
Shaashadda Ilaalinta Dharka Sare ee Tayada leh
Muraayadaha Amniga Fog Anti-Fog tayo sare leh
Dharka Fudud iyo Dharka Qalitaanka
2626-7 3 Loover of tayo sare leh tuurista Surg ...
Maxaa loo doortaa Missadola?
Ku qanacsanaanta macaamiisha ayaa ah dariiqa aan horay u socono